Sarudzo kuSpain hadzikanganise pamusika wemasheya | Ehupfumi Zvemari
Chiziviso chekubata kwesarudzo huru pa inotevera Kubvumbi 28 haisi kukanganisa kuenzana. Ichi chinhu chakashamisa chikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati mune izvo zvinowanzo gadzira kugadzikana mumisika yemari. Asi panguva ino haisi kuunza pesvedzero kumasecurity akanyorwa mune yakasarudzika indekisi yemari yenyika, iyo Ibex 35. Mune kufamba kunogona kutarisirwa senge kusinganzwisisike nekuda kweasingawanzo mumhando iyi yemamiriro.
Parizvino, musika wemasheya wakanyanya kunetsekana nezve zvimwe zvakateedzana zviri kugadzirisa hutongi hweIbex 35. Semuenzaniso, iyo hukama hwekutengeserana pakati peUnited States neChina, nhau dzichangoburwa pamusoro pekukwira kwenzvimbo yekukwira kana mhedzisiro yebhizimusi iyo makambani akanyorwa ari kupa. Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti misika yezvemari iri kufamba munzira yeparutivi kubva kwazviri kutora simba rakawanda kuti ibude.
Mukati meichi chirevo, simba resarudzo dzinotevera harisi zero. Zvirinani zvenguva uye nemubhadharo wezvingaitika mumavhiki anotungamira kumhemberero yacho. Asi kunyanya kana mhedzisiro ichizivikanwa uye imwe mhando yehurumende inogona kufungidzirwa kwemakore mashoma anotevera. Kunyangwe ichi chatova chimwe chinhu chatichazobata nacho pakaumbwa hurumende itsva munyika medu. Iko iko kweSpanish stock market ichafanirwa kuita, neimwe nzira kana imwe.
1 Sarudzo hadzina kunyorwa parizvino
2 Ivo vanotengesa kuhurumende yezana
4 Maitiro ekuita
Sarudzo hadzina kunyorwa parizvino
Panguva ino, chete hunhu hwesimba remagetsi reSpanish ndiwo chete ari kungwarira kuziviswa kwesarudzo. Nekuti chikamu chakarongedzwa uye zvinoenderana nesarudzo dzehurumende musimba. Mupfungwa iyi, vakaratidza kushomeka kushoma semhedzisiro yekusava nechokwadi kwechaitwa nehurumende nyowani. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti hukama hwePedro Sánchez Executive ne makambani emagetsi vanoverengerwa sevanoshamwaridzana kwazvo. Iko kwavakaisa nyeredzi mumusangano mukuru wekusimudzira mumwedzi ichangopfuura, pamwe nekuwongorora padyo ne30%.
Kune rimwe divi, zvikamu zvakasara zvemari dzeSpanish ndezvenguva zvisina hanya neyakaitwa sarudzo. Nekuti mukuita, ivo havaratidze maitiro aya mu kukoshesa mutengo yezviito zvako. Kune rimwe divi, zviri kushamisa kuti chikamu chemabhangi hachisi kufambiswa nesarudzo iyi zvakare. Iko iko kwakanyudzwa mune ye-bearish maitiro asi nekuda kwemamwe mamiriro ezvinhu, senge dzekusingaperi matambudziko ivo pachavo. Kunge mamwe matunhu emasheya anoumba yakasarudzika equity index, Ibex 35.
Ivo vanotengesa kuhurumende yezana
Chido chekuchengetedzwa chinomiririrwa mumusika weSpanish wemusika ndechekuti pakupedzisira pane hurumende yemubatanidzwa pakati pe PSOE uye Citizens. Chinhu chinosimbiswa neazvino ongororo yakaitwa mumwedzi yapfuura. Chingave chiitiko chinofanirwa kuverengerwa sechigutsa kwazvo kune zvido zvemakambani akanyorwa. Kunyanya, zvine chekuita nebhengi renyika, iro risingade mamwe matanho anoitwa nemutungamiriri wazvino.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganikwa panguva ino kuti zviyero zveSpanish zviri munguva yakaoma kwazvo. Nekuti iri pamharadzano yekutora imwe kana imwe maitiro uye kwechinguvana haisi kukanganiswa nenyaya yekuti mumwedzi miviri pachave nesarudzo munyika medu. Kana zvisiri, pane kudaro, mhedzisiro yacho haina basa uye inotorwa nekutorwa nezvimwe zvakanangana nezve hupfumi pachahwo. Zvino mubvunzo wakabvunzwa nevamwe vadiki nepakati varimi ndewekuti maSpanish equities achabata kwenguva yakareba nenzira idzi dzekuumba mitengo mumitengo yemasheya.
Chimwe chezviitiko izvo zvinofanirwa kuongororwa panguva ino zvinokonzerwa nemamiriro ezvinhu ayo mamwe emakosheni akakosha eiyo inosarudzwa index yeSpanish stock market iri kupfuura. Nekuwedzera mumwedzi miviri yekupedzisira izvo zvakakonzera kuti mitengo yavo ikwire neinenge 15%. Ndiyo chaiyo kesi yekambani yekuvaka Ferrovial iyo yakaunganidza kuwedzera kwe15% kubvira kutanga kwegore. Kuve nekupokana kwakakura pamatanho e20,58 euros pamugove, inova iyo hwaro hweiyo bullish chiteshi iyo yawakagadzira.
Mune ino mamiriro kune boka remastock values ​​ayo achange achinyatsoziva zvinogona kuitika kubva ikozvino zvichienderana nehurongwa hwesarudzo. Uye izvo nenzira ipi neipi, zvinogona kuve zvakakosha kwazvo kuti maitiro ayo anogona kunongedza kune rimwe kana rimwe divi rechikero. Kana mune yakaipisisa kesi, kana uchinge uine iyo data kuti uzive chii iyo ruvara rwehurumende nyowani kudzidziswa kuSpain. Kubva pakuona uku, sarudzo dzemitemo munyika medu dzinogona kuve dzakakosha.
Muchiitiko ichi, kungwara kunofanirwa kuratidza zviito zvevashambadzi vadiki nepakati kubva zvino zvichienda mberi. Beyond vamwe zvekufunga nezvehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha zvekuchengetedzeka zvakanyorwa pamisika yemari. Imwe nzira inogona kushandiswa ndeyekugara kure nemisika yemari kudzamara kusahadzika pamusoro pezvichaitika kuSpain kwagadziriswa.
Kuve uchitova nedata rekuti marongero ehupfumi emutungamiri mutsva angave ani. Saka kuti nenzira iyi, iri muchinzvimbo chekugadzirisa zvakasarudzika kutenga mumusika wemasheya wenyika. Nekuderedzwa kwenjodzi mumabasa anoitwa nevatengesi. Zvekuti iyo capital inowanika yekudyara mune izvi zvemari zvinhu iri kuchengetedzwa. Seimwe nzira yekuwedzera mihoro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Sarudzo kuSpain hadzina kukanganisa pamusika wemasheya
Maitiro ekusimbisa iyo DNI